Ankizy Malagasy 44 000 No Mamoy Ny Ainy Isan-taona Noho Ny Tsy Fahampian’ny Fitsaboana. Ahoana No Hanafoanana Izany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2014 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, 日本語, Swahili, Català, বাংলা, عربي, Ελληνικά, Français
Zaza Malagasy, sary avy amin'i Yves Picq – CC-BY-SA-3.0
Ankizy 44 000 no mamoy ny ainy isan-taona eto Madagasikara (tarehimarika tamin'ny taona 2012). Toa tsy mahataitra tahaka ny tarehimarika rehetra anefa izany isa izany, izay mihitsoka eo afovoan'ny tabilaon'ny vokatry ny fahasalam-bahoaka.
Toe-javatra mampahonena tsy misy anarana miverimberina in-44 000 anefa izany hoan'ireo fianakaviana matetika tsy mahita vonjy. Ankizy 44 000 izany dia mitovy isa amin'ny mponina latsaky ny 5 taona ao amin'ny faritra Alpes-de-Haute-Provence. Sy in-15 avo heny amin'ny isan'ireo niharam-boina tamin'ny 11 septembra .
Vokatra mampalahelo momba ny fahasalamam-bahoaka.
Eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka, vondrona roa no tena marefo eto Madagasikara: ireo ankizy latsaky ny dimy taona sy ireo vehivavy mitondra vohoka. Indreto isa vitsivitsy mamehy ny vokatra mampalahelo mikasika ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara :
• 72 ao anatin'ireo zaza 1000 teraka velona ny taham-pahafatesana eo amin'ireo ankizy latsaky ny dimy taona.
• 50 %-n'ireo ankizy latsaky ny dimy taona dia manana fahatarana eo amin'ny fitomboana, tarehimarika goavana raha oharina amin'ireo firenena Afrikanina hafa
Ny vondrona faha-roa tena marefo – ireo vehivavy bevohoka – izay anisan'ny mponina manana filàna lehibe eo amin'ny resaka fanohanana ara-pahasalamana. Ny taha-pahafatesana eo am-piterahana dia tombanana eo amin'ny 498 ao anatin'ny fiterahana 100 000 mahomby ary maro ny antony mahatonga ny fahafatesana :
• Voafetra ny fandraisana mpiasa mpampiteraka;
• Ratsy kalitao ny fitsaboana alohan'ny fahaterahana;
• Tsy fisian'ny fitsaboana vonjitaitra hoan'ny fiterahana;
• Tsy fahampian'ny fanaraha-maso aorian'ny nahaterahana ;
• Mitombo ny tsy fahafaham-po mikasika ny fandrindram-pianakaviana. Vehivavy roa ao anatin'ny telo no tsy miteraka any amin'ny toeram-pitsaboana, ary nihena 51 % hatramin'ny 44 % ny taham-piterahana atrehina mpitsabo tao anatin'ny dimy taona.
Ao amin'ity lahatsary manaraka ity, mampiseho ireo hetsika tokony atao haingana mba hampihenana ny fahafatesan'ny zaza ny UNICEF, tahaka ny vakisiny sy ny fanaharamaso ny sakafon'ireo zaza vao teraka [en]:
Inona no fepetra azo raisina?
Tsy ny fisantaran'andraikitra akory no tsy misy mba hamonjena ireo filàna vonjimaika hoan'ireo ankizy kely. Ao Toliara (Atsimon'i Madagasikara), manampy hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitohy ny tetikasa toerana fanomezan-tsakafo hoan'ny mpianatra . Mandray sy mampianatra ireo ankizy mirenireny eny an-dalambe sy ireo fianakaviana sahirana ny fikambanana “Les enfants du Soleil” (ireo ankizin'ny masoandro”). Mahazo sakafo isaky ny atoandro ao amin'ny toerana fanomezan-tsakafo hoan'ny mpianatra ihany koa ireo ankizy :
Misy ihany koa ireo fandaharan'asa hafa miady amin'ireo olana goavana, tahaka ny aretin'ny rà (drépanocytose) sy ny tazomoka. Eo ohatra ny fikambanana Lutte contre la Drépanocytose à Madagascar – France (LCDMF) [Ady amin'ny aretin'ny rà] izay manao fanentanana mikasika ity aretina manaranaka mahakasika ny 2% n'ny mponina malagasy ity:
Tamina taratasy misokatra hoan'ny Praiminisitra Malagasy Kolo Roger, naneho ny maha-zavadehibe ny tokony hijerena ity olana ity ny fikambanana LCDMF, indrindra any amin'ireo faritra saro-dalana sy mitoka-monina izay tsy mba manana rafi-pitsaboana manara-penitra:
Tsy azo hiononana handaisana fepetra tapatapany intsony ny olana makadiry ara-pahasalamana manjò ireo olona tena sahirana any amin'ny faritra ahitana taha 20% izany hoe ankizy iray ao anatin'ny dimy tratran'ny aretin'ny rà ary mety tsy ho velona mihoatra ny fahadimy taonany. Satria mahatafiditra ny sampam-pitsaboana manokana rehetra io aretina io, dia efa ahafahana mitaky fa tena ilaina ny fandraisanao fepetra tsy misy hatak'andro amin'ny fahasalamana manakaiky vahoaka.
Zava-dehibe indrindra ihany koa ny firotsahana an-tsehatra amin'ny fahasalaman'ny reny noho ny fitomboan'ny mponina haingana loatra eto Madagasikara. Tsy afa-miditra amin'ireo fanaovan-draharaha momba ny fandrindram-pianakaviana ny vehivavy iray manambady ao anatin'ny dimy (19%) maniry hanelanelana na hametra ny fiterahana ary tombanana eo amin'ny 1 ao anatin'ny zaza 10 teraka velona ny tahan'ny fanalan-jaza.
Na dia eo aza ireo ezaka natao, miatrika olana marobe manohintohina ny fanatsarana ny tondrom-pahasalamana i Madagasikara. Noho ny fahasamihafana eo amin'ny vola miditra ao an-tokantrano sy ny fahafahana mandeha eny amin'ny toeram-pitsaboana no mahatonga vokatra ara-pahasalamana ratsy sy tsy mitovy tantana. Araka izany, olona iray ao anatin'ny efatra (23 %) izay mijalin'ny aretina no tsy mandeha any amin'ny toeram-pitsaboana satria tsy manambola handoavana sara-pitsaboana izy ireo. Olana iray hafa ihany koa ny fahazoana fanafody satria manelingelina ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy ireo fanafody ny tsy fisian'ny fitantanana sy ny fanarahamaso ny ambim-panafody ary ny fampitaovana. Vokatr'izany, mankany amin'ny servisy ara-pahasalamana in'efatra avo heny mihoatra noho ireo mahantra ny mpanankarena: ny 40,9 % n'ny totalin'ny fandaniana eo amin'ny seha-pahasalamana no ampiasain'ny mpanankarena, raha toa ka 10,1 % no ampiasan'ny mahantra.
Mitovy ny toro-hevitra avy amin'ireo manam-pahaizana, ilaina ny mandray fepetra haingana. Ny laharam-pahamehana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia :
hamafisina ny fandaharan'asa ara-tsakafo izay mikendry ireo vondrona marefo indrindra sy ny fahazoan'izy ireo sakafo ampy;
hamafisina ny fahazoam-bokatra amin'ny fandaniana ara-bola ;
hatsaraina ny fitantanana ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana
mampiditra fitaovana hoan'ny fiterahana tsy misy risika
mametraka mpitsabo eny amin'ny toera-pitsaboana any ambanivohitra